Yedu Rear View Mirror PK9506 inokodzera TOYOTA HIACE mutyairi.Chitupa chedu chechigadzirwa chine EMARK, ISO9001, TS16949, SGS, SASO, CERFICATE YEMAHARA, CERFICATE YOKUTANGA.Tinopa zvigadzirwa zvinovimbika nemhando yepamusoro mukufambisa panguva. zvikamu zvemadhipatimendi, zvine simba rekugadzira uye yekugonesa kugona.
Rori Kurutivi Mirror PK9510
Rori Kurutivi Mirror PK9512
TRUCK SIDE MIRROR KUSVIRA KUONA MIRROR PK9512 AUTO KUNZE KUSANGIRA MIRROR KUSVIRA MIRIRORI YETOOTA HIACE. Cherekedza mamiriro emumigwagwa kubva pamakona mazhinji uye kutyaira zvakachengeteka Kuti uwane chinangwa ichi, isu tasimbisa yakasimba kudzora kwemhando yepamusoro, kuongorora, kwakanyanya manejimendi uye yakanaka nzira yekugovera.
Yedu Rori Side Mirror PK9590 inokodzera Hino.Mirror girazi repamusoro tekinoroji iri chrome yakafukidzwa, iyo inogona kudzivirira kudzivirira kupenya uye kuita kuti mutyairi anzwe kugadzikana.Tinopa China matori zvikamu mazana maviri emazana zvingave zvepakutanga kana zvikamu zveOEM. Iwe unogona kuwana "FAW", "DFAC", "Sinotruk", "Shacman", "JAC", "Hongyan", "Auman", "Foton" eparutivi zvikamu zvakaputsika pamusika mutengo.
PK9592 inokodzera Hino dutro, Toyota uye akawanda epasirese .Mirror girazi pamusoro petekinoroji yakaiswa chrome, iyo inogona kudzivirira glare uye kuita kuti mutyairi anzwe kugadzikana. 100% Brand nyowani uye yepamusoro mhando.Mutengesi wedu anofanirwa kunge ari ISO9001 anokwanisa.Mazhinji acho vari TS16949 vanokwanisa vagadziri.
Yedu yekudzoreredza girazi ndechimwe chezvakakosha zvikamu zvekuchengeteka kwemuviri wemotokari.High Quality PK9810 igirazi remota yeHino & Isuzu FTR.SWB ine yega yega zvikamu zvekuparadzira zvekuparadzira sisitimu uye yakakwana kutenga, kutengesa, kugadzira pamwe nekupa system. chigadzirwa zvikamu, uye kusanganisira zvese zvikamu zveChina rori.
Rori Kurutivi Mirror PK9440
European Tractor Muviri Zvikamu rori girazi PK9440 inokodzera Mercedes-Benz Actros MP4.Competitive price.Our fekitori yakanangana neRori Mirror ichitsvaga nekuvandudza, yakapasa ISO9001 yemhando manejimendi manejimendi system uye zvichingodaro. Panguva iyi, isu takapfuurawo Emark uye DOT zvinobudirira.
Rori Kurutivi Mirror PK9438
Yedu inodzosera girazi ndechimwe chakakosha chengetedzo zvikamu zvemotokari muviri.PK9438 inokodzera maMercedes Benz vatambi MP3 akateedzana. Iyo inoshandiswa kucherechedza mamiriro emumugwagwa kuseri kwemotokari uye mutyairi kuti atarise muviri wese wemota panguva yekutyaira. Magirazi edu ekumashure zvinhu zvitsva.
PK9823 inokodzera Mitsubishi FUSO 110PS. Tarisa pane Kugadzira Magirazi Magirazi uye mamwe maMirror zvigadzirwa.Iyo ndiyo inonyanya kufarirwa girazi rinotenderera kune akasiyana magirazi magirazi, isu tine girazi rakatenderera uye girazi redenderedzwa. Asi vamwe vatengi vanotengawo chrome convex girazi uye bhuruu convex girazi. , ivo anoshandiswa epamusoro giredhi mota kumashure anotarisa girazi.
Yedu inodzosera girazi ndechimwe chakakosha chengetedzo zvikamu zvemotokari muviri.PK9468 inokodzera maMercedes Benz vatambi MP3 akateedzana. Iyo inoshandiswa kucherechedza mamiriro emumugwagwa kuseri kwemotokari uye mutyairi kuti atarise muviri wese wemota panguva yekutyaira. Magirazi edu ekumashure zvinhu zvitsva.
Rori Chikamu Chikamu Kurutivi Mirror ye mitsubishi Rosa dzakateedzana MB094920 PK9849 Rearview Mirror. Kugadzirwa kwedu kunogadziridzwa zvinoenderana neyepasi rose chiyero kuremekedza mhando yemhando asiwo kugadzirisa mashandiro uye yekupa cheni.Mazhinji emirazi akaiswa E-mucherechedzo uye DOT chitupa.